Ukungenanto kungomnye weengxaki ezixhatshazayo kumfazi. Awunakuze ulungele eso sigwebo. Akusoloko kuyimfuneko ukukholelwa yonke into kwaye ngokuqinisekileyo akudingeki ukuba ubeke izandla zakho. Oku kuxilongwa ku-100% kuqinisekiswe kuphela ngexesha kunye nokungaphumeleli kwemizamo yonyaka yowesifazane yokukhulelwa. Kungakhathaliseki ukuba ugqirha wakho ulungile kangakanani, kodwa uya kuhlala ekhangele izizathu ezingenakukuvumela ukuba wabelane ngolonwabo lolunina.
Into ebaluleke kakhulu kukuqonda umahluko phakathi kwepesenteji ephantsi yokukhulelwa kunye nokungakwazi ukuzala nokuzala umntwana. Esi sibini sifuna ukufumanisa kwaye ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuphelisa izinto kunye neengxaki eziphazamisa inkqubo yokukhulelwa ngokufanelekileyo kunye nempumelelo.
Ukutyelela okokuqala ugqirha
Ukuze kufezekiswe umphumo omuhle kwiimvavanyo zokukhulelwa kwaye ukhohlwe malunga nokuya kweenyanga ezili-9, bobabini abalingani kufuneka bafumane uviwo lwezonyango. Ingxaki yobunzima bokukhulelwa ingabangelwa yimbini neyowesilisa okanye ngokungahambelani.
Okokuqala, isibini sidinga ukuthetha nodokotela, ukuze acacise:
Kwingaphi ngapha kwelo xesha umfazi wayikhupha isisu, isisu kunye nokukhulelwa;
ubukho babantwana abazalelwe kubafazi;
ukuhamba rhoqo kumjikelezo wesini;
zidluliselwe zizifo zombini zomntu, ukulimala, ukuhlinzwa;
Izindlela ezisetyenzisiweyo zonyango lwe-infertility, njl.
Isibini esitshatileyo kufuneka silungele ukunika ugqirha umfanekiso ocacileyo wobomi babo obusondeleyo kunye nexesha labo. Ukunyaniseka kwakho kuya kuxhomekeka kuninzi. Isifo esifihliweyo kunye namachiza asetyenziswayo kunokusebenza njengesinye sezizathu ezibalulekileyo zenkcenkceshelo yenkqubo yokuchumisa. Ulwazi oluchanileyo luya kunceda ukhethe indlela efanelekileyo yokuxilongwa kunye nokonyango.
Kwindwendwe ephambili kumgqirha, ukuhlolwa kwamadoda (uviwo lwe-urological) kunye nomfazi (uvavanyo lwezilwanyana) kufuneka. Kubalulekile ukupasa iimvavanyo ngenxa yobukho beenkqubo kunye nezifo ezivuthayo. Kwakhona kubalulekile ukuba umfazi abe nokuhlolwa kwe-ultrasound ukuhlolwa kwangaphakathi.
Iziphumo zeemvavanyo kufuneka zibonise umgangatho wesilisa sowesilisa kunye nesimo seentlobo zowesifazana kwisisu, isisu, ama-tublopian tubes kunye nama-ovari. Oku kuya kunika isiseko seziphumo eziyimfuneko nokubhala inkqubo yonyango, ekufuneka ihlengahlengiswe kwinqanaba lomfazi lomfazi. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ezinye iindlela zokunyanga kunye nokunyanzelisa ziyakwenzeka kuphela kwiintsuku ezithile zokuya esikhathini.
Inkqubo yoviwo kunye noxilongo olunzulu
Uvavanyo kunye novavanyo olujulile luyimfuneko ukufumanisa isizathu esiyiyo sokuphazamiseka komsebenzi wokuzala kwisibini:
Iyokuqala i-spermogram. Ivesi layo kuyimfuneko ekufundeni umgangatho wesilisa kunye nokukwazi ukuvelisa ngokufanelekileyo;
Ukuhlolwa kwegazi ngenxa yobukho bamahomoni amabhinqa aveliswa yi-thyroid gland: i-testosterone, i-FSH, i-LH prolactin, i-estradilol. Unika ngemihla yokugqibela yokuya esikhathini;
I-Hysterosalpingography yinkqubo eza kunika idatha epheleleyo malunga nesimo sesisu kunye neethubhu zayo ngexesha lokuvuthwa kwi-ovary ye-oocytes, kwaye lo ngumhla wesihlanu wesibhozo;
Ukuvavanywa kobukho be-ovulation kunye nokwakhiwa kweeseli ezivuthiweyo ezilungele ukukhulelwa. Yenziwa ukusuka kwishumi elinanye ukuya kwishumi elinesibhozo somjikelezo wesini;
Kwaye ekugqibeleni kodwa kubaluleke ukubaluleka kokuhlolwa kwegazi kwinqanaba leprogesterone kuyo kunye ne-endometrial biopsy ngoncedo lwe-hysteroscopy, eyenziwa ekupheleni komjikelo wesetyhini ngosuku lokuqala lwemashumi amabini anesibini.
Yaye khumbula, unako ukuhlala unxunguphekile, kodwa uzame ukulwa nolonwabo lolunina - kungekhona nje, kodwa kubaluleke kakhulu kubo bonke abambini!
Ukuphuhliswa kwabantwana be-intrauterine ngenyanga
Yoga kwi-trimester yesithathu yokukhulelwa
I-Pyelonephritis ekukhulelwe, ingozi yomntwana
I-Chlamydia, umphumo wokukhulelwa
Yintoni eyahlula itiye eluhlaza kwitayi emnyama
Iimpawu zeenwele ezihle zeentombazana
Umkhuhlane wabantu kubantwana
Ukuphila okunempilo nokulala
I-Cocktail "Iintsuku Ezivuyayo"
I-Tortilla nenkukhu etyongwe
Ungakusindisa njani ukutya kunye neenzuzo zezempilo?
Ukuzivocavoca umzimba ukuqinisa imisipha yomva